MAANHADAL: Waa kuma Musharrax Eng. Maxamuud Khaliif Xasan JABIYE? – Radio Daljir
MAANHADAL: Waa kuma Musharrax Eng. Maxamuud Khaliif Xasan JABIYE?
Noofember 2, 2018 8:47 b 1
Barnaamijka MAANHADAL waxaa maanta marti u ah Musharrax Madaxweyne Puntland Injineer Maxamuud Khaliif Jabiye. Haddaba Musharrax Jabiye waa kuma? Xaggee ka soo galay siyaasadda? Muxuu yahay ganacsigiisu? Maxaa ku dhaliyey in uu isu sharraxo Madaxweyne Puntland?
Jawaabaha su’aalahaas iyo waliba kuwa shacabka Puntland, dal iyo daafaha dunidaba, kaga bogo barnaamijka Maanhadal ee maanta.
MAANHADAL 156 Siyaasadda & Dhaqaalaha 431 Wararka 14950
Madaxweyne Mustafe Cagjar oo gudi u saaray shaqaaqadii ka dhacday Jigjiga (daawo)
sacid. waqoyi 9 months
asc waxan halaka ka salamaya musharaxa maxadaxwayane mudane jabiye waxan ka cadanaya hadanunahay cidamada inu waxa uqabato cidamada waxan urajeyana guul guul